VB Script လေ့လာချင်လိို.ပါ - MYSTERY ZILLION
VB Script လေ့လာချင်လိို.ပါ
ye yint depar
March 2011 edited March 2011 in VB6
သင်တန်း ရှီရင် ပြောပြစေလိုပါတယ်
ဘယ် ဟာကို Reference လုတ်ရမလဲ ဆိုတာလဲပြောပြပေးပါ
VBA <> VBScript AND VBScript <> VB6
but all are similar
Reply ပြန်ပေးတဲ့ အကိုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာက web development အတွက်မဟုတ်ပါဘူး
Software တွေကို Install လုတ်ရင် Next တို Agree တို ဖြေပေးရတာကို မဖြေ ချင်တော့ပဲ
Script ကို RUN လိုက်တာနဲ့ Install လုတ်ပီးသား Crack လုတ်ပီးသား လုပ်ချင်တာပါ
ပီးတော့ Silent Mode installation လဲလုပ်ချင်တာပါ
ကျွန်တော် စဉ်းစားတာလွဲနေရင် ပြောပေးပါအုံး
silent installer can make with smart installer. No need to write code.
ကျေးဇူးပါ အကို လေ့လာကြည့် ပါအုံးမယ်
Script နဲ့ဖက်သက်ပီးတော့ e-Book ရှာတွေပီ အကိုရေ
I amanew user in MYSTERY ZILLION n I want2read VB scripts Ebooks.
Plz reshare me Ko Ye` Yint Depar.
July 2011 edited July 2011 Moderators
i think your can tons of book from <a href="https://www.facebook.com/wowebookdotcom">here</a>;